China Transparent chelated sirivha mhinduro fekitori uye vagadziri | Langyi
AntibacMaxTMläpinäkyvä chelated sirivha mhinduro inogadzirirwa neyedu yakasarudzika nanotechnology uye chelating tekinoroji, iri yakachengeteka, inoshanda uye isiri-chepfu. Inogona kuuraya mabhakitiriya munharaunda nekukurumidza uye nenzira kwayo, uye kudzivirira kubereka, hutachiona uye kutapurirana kwehutachiona. Iyo bacteriostatic kushanda kwe99.9% inogona kuwanikwa ne5ppm.
■ Hutano uye husingatsamwisi
Iyo ine yakanaka bactericidal maitiro pane Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pneumococcus, Pseudomonas aeruginosa, nezvimwewo, uye antibacterial mhedzisiro yesirivoni ioni kana zvinhu zvesirivha mumvura zvinowedzerwa.
■ Yakachengeteka uye inochengetedza zvakatipoteredza, iri nyore kushandisa
Transparent yakaoma sirivheri solution L800
yakaoma sirivioni ioni
yakachena kuchena mvura
yero yakajeka nzira mhinduro
Disinfecting solution: Sanganisa nemvura yakachena kanokwana mazana mana, pfapfaidza kana kupukuta pamusoro, wozouraya utachiona.
AntibacMaxTMantibacterial solution yakashandiswa kumishonga yemishonga; Motokari disinfection uye sterilization; Disinfection uye sterilization yemidziyo; Antibacterial machira nemapepa; Disinfection uye sterilization yemhuka dzinovaraidza; Kudya uye michero kuchengetedzwa, nezvimwe.
Pashure: Sirivha ion antibacterial yekupedzisa mhinduro
Zvadaro: Kunyunyuta antibacterial mumiriri
Transparent Chelated Sirivha Solution
Antibacterial Nonwoven Cloth, Antibacterial Masterbatch, Antibacterial Electret Masterbatch, Polymeric Antihydrolysis Mumiriri, Antibacterial Yarn, Antibacterial Melt-Yakavhuvhuta Masterbatch,